Howlgalo laga sameeyay buuraleyda Puntland | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Howlgalo laga sameeyay buuraleyda Puntland
Howlgalo laga sameeyay buuraleyda Puntland
Ciidamada PSF-ta Maamulka Puntland ayaa lagu soo warramayaa inay howlgalo ka dhan ah Ururka Al-Shabaab ka fuliyeen degaanada Muguc iyo Ceel Onkod ee buuraha Cal Madow ee Gobolka Bari.
Hawlgalka ayaa Saraakiisha hoggaamineysa waxaay sheegeen in ujeedkiisu yahay sidii loo soo afjari lahaa xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee miinooyinka ku aasa wadada isku xirta deegaanada Sugure, Balikhadar iyo buuraha Galgala ee gobolka Bari.
Saraakiisha Ciidamada Hogaaminaysa ayaa sheegay in Howlgalku intii uu socday ay ciidanka u suurta gashay inay gacanta ku soo dhigaan xubno lagu tuhmayo inay xiriir la leeyihiin Al-Shabaab kuwaasoo baaritaano la marin doono.
Saraakiisha hoggaamineysay howlgalka ciidanka Puntland ay sameeyeen ayaa sheegay inay sii wadi doonaan gulufka ka dhanka ah Kooxaha Al-Shabaab iyo daacish oo mararka qaar weeraro ka fuliya degaannada Maamulka Puntland.
Previous articleDHAGEYSO:Duqii hore ee Mandera oo ku baaqay in laga wada hadlo dhibaatooyinka tacliinta ee waqooyi bari
Next articleLaamaha ammaanka oo gacanta ku dhigay wakiilka deegaanka hoose ee Sololo oo baxsad ahaa